Ankizy marevaka - miaraka amin'ny lavaka fohy, ho an'ny tanora feno, mitafy, miaraka amin'ny bolo mahaliana, boho, miaraka amin'ny tsipika, birao, lohataona, chiffon
Satelika marevaka - sary 52 sarin'ny lamaody amin'ny fotoana rehetra
Ao am-paladonan'ny maoderina maoderina rehetra dia tokony homena toerana ho an'ny akanjo marefo. Ity akanjo ity dia tafiditra ao amin'ny sokajy arsenal fototra ary noho izany dia tsy mandeha amin'ny lamaody. Amin'izao vanim-potoana izao, ireo mpanakanto dia manolotra vaovao vaovao mahaliana sy manavao ny fironana modely amin'ny lasa.
Tamin'ity taona ity, ny karazam-boninahitra vehivavy tsara tarehy dia tsy manalavitra. Vao haingana, ireo mpanakanto dia nanitrikitrika tamin'ny fampiasana akanjo toy ny tsipìka mafy, fa koa ao amin'ny kiraro isan-karazany , fampifangaroana am-pitiavana ary eny. Mampiasa karazam-batana isan-karazany ireo mpanamboatra lamaody, izay ahafahanao manao lamaody malaza amin'ny fotoam-pahavaratra sy amin'ny hatsiaka. Ary ny hevitra ara-tsindrim-pamantarana voalohany dia hanampy ny zazavavy tsirairay hahita ny modely miavaka. Andeha hojerentsika ireo akanjo marevaka indrindra amin'ny vehivavy 2018:
Asymmetric . Ny làlana tsy dia mazava loatra amin'ny silhouette dia hanintona ny saina foana ary hanasongadina ny fomba mahazatra ny sary. Ao amin'ny fironana eo amin'ilay modely, lava lava sy lavaka eo anoloana, endritsoratra miaraka amin'ny bingo asymmetrika sy decor.
Fitted . Ny akanjo izay manantitrantitra ny tebiteby dia hanamboatra ny tongolo ho vavy sy kanto. Ao amin'ny modely lamaody amin'ny alim-pifaneraserana sy ny dikan-teny miaraka amin'ny fehikibo eo amin'ny kitapo, izay matetika mifanohitra ny fananganana.
Elongated . Ny vahaolana lamaody dia akanjo tsara tarehy. Ity safidy ity dia mety ho singa miavaka amin'ny tsipìka fahavaratra na ho toy ny ampahany ambony amin'ny fehin-kibo miaraka amina ety ambany sy matevina.
Shortened . Mijery tsara sy mijery tsara tarehy, manoloana ny lavaka. Ity endrika ity dia mampiseho fitiavana amam-boninahitra na silhouette maimaim-poana. Stylists dia manome soso-kevitra amin'ny fanamafisana ny tendron-koditra mifamatotra amin'ny pataloha na ny akanjom-boninahitra ambony na ny tavy ambany, izay hanokatra ny tiboky sexy.
Overseas . Ny endrika "tsy avy eo an-tsorokao" dia natolony ho an'ny fanangonam-bokatra ivelany sy ny volombava volomparasy, fa koa ny akanjon'ny vehivavy tsara tarehy. Ny toetra mampiavaka ny modely toy izany dia silhouette maimaim-poana sy tsipika tsotsotra iray, izay manintona tsara ny endrika marefo.
Lamozika marevaka miaraka amin'ny akanjo lava lava
Amin'ny fomba nentim-paharazana, ny akanjon'ny vehivavy malaza dia aseho amin'ny endrika marevaka sady lava tanana. Ity tsipiriany ity dia afaka mihetsika sy mahafinaritra. Amin'ny lamaody, akanjo mareva-doko ho an'ny zazavavy miaraka amin'ny jiro maivana maimaim-poana, izay mety hahatonga azy amin'ny lambam-pandriana be marenina na ny fingotra matevina. Modely mahafinaritra toy izany dia tena mahaliana tokoa amin'ny hazavana sy ny rivotra mifandraika - chiffon, silk, andalana ary hafa. Raha mitady vahaolana tany am-boalohany sy tsy fahita firy ianao, tandremo ny fomba fanao amin'ny akanjo marevaka lava sy lava "bat."
Ankizy mamelana akanjo fohy
Amin'ny fotoana mafana indrindra amin'ny taona, ny modely misokatra misokatra dia safidy tena izy. Ny endri-pandaharana toy izany dia akora fohy. Mandritra izany fotoana izany, ny mpahaikanto dia manolotra karazan-javatra maro samihafa. Ny vahaolana malaza dia ny tafo fanafody tsy manan'elatra. Na izany aza, raha mitaky ny soroka mikatona ny akanjonao, dia ho hitanao ny akanjom-behivavy mareva-doko miaraka amin'ny T-shirt. Ny singa fohy dia natolotra sy ¾ amin'ny halavany, izay mahomby amin'ny andro mafana. Ny sary amam-pihetseham-po sy ny vehivavy kosa dia manampy fofomamy mahavariana mahafinaritra.
Lamba mareva-doko ho an'ny vehivavy
Ny anjara asa manan-danja amin'ny endrika lamaody dia maneho loko. Mandritra ny fironana, ireo harena manankarena sy manintona, ary ny lokony malefaka ny loko. Mandritra izany fotoana izany, ireo mpanakanto dia manantitrantitra ny lazan'ny vondron'olona volo, ary mifanohitra amin'ny combinairan'ny roa sy telo. Ny sary matetika dia manintona sy tena izy. Ireo akanjo marevaka mody dia aseho amin'ny abstractions amin'ny voninkazo, geometry, biby ary mahafinaritra. Ny tongolo hafahafa sy mahomby dia manampy sy modely amin'ny endriny mahaliana. Andeha hojerentsika ny vahaolana malaza indrindra:
Miaraka amin'ny embroidery . Ny lamaody tsara tarehy dia mety ho mifanohitra amin'ny monophonic na mamiratra ary mamy. Eo amin'ny fironana, embroidery amin'ny endriky ny voninkazo sy ny firaiketam-boninkazo, ny biby an-tanety sy ny vorona, amin'ny fomba amam-pirenena sy ny firavaka.
Amin'ny soroka misokatra . Ampiasao ny fijerinao amin'ny fananana firaisana ara-nofo. Amin'ny alalan'ity asa ity, ny fomba amam-panao lamaody miaraka amin'ny soroka misokatra dia hiatrika tsara. Ao amin'ny sehatra ho toy ny ampahany malalaka amin'ny tendany, izany no manokatra ny faritra afovoany sy ny endriny miaraka amin'ny sary sokitra.
Translucent . Safidy iray hafa manintona sy manintona ihany koa ny akanjo izay misy fiantraikany tanteraka. Ny lamba vita amin'ny halimo dia mety ho tsotra na ampitomboina amin'ny embroidery, applique, print print.
Amin'ny flounces . Ny lamaody amin'ny lamaody, izay lasa tamin'ny faran'ny taon-dasa, dia mbola modely, nampidirin'ny tsiranoka matevina na matevina. Ny Shuttlecock dia afaka manamboatra ny soroka, ny akanjony, ny sisiny ambany amin'ny vokatra na miasa toy ny paty amin'ny tavy.
Ho an'ny fofona . Mba hanamafisana ny tsy fitoviana eo amin'ny sary sy ny toetra tsy dia mahazatra ao amin'ny style dia hanampy amin'ny alàlan'ny fofona hafa amin'ny bokotra. Ny safidy toy izany dia aseho amin'ny fehikibo vita amin'ny kofehy tsara tarehy izay mamorona tsipìka tsara tarehy na eo amin'ny fihobiana. Ny endriky ny modely toy izany dia ny vozona voajanahary voajanahary.
Stylous chiffon blouses
Ny iray amin'ireo vokatra malaza indrindra dia lamba tsara tarehy. Miankina amin'ny loko, ny chiffon dia afaka manome vokatra miovaova ihany koa, izay manampy ny fitondran-tena amin'ny sary. Noho ny fanamoràna ny rafitra, ny endriky ny akanjom-behivavy dia tsy mety. Fa ity no zava-nisongadina tamin'ireo akanjo tsara tarehy. Ny akanjo mareva-doko avy amin'ny chiffon dia matetika mameno ny jiron'ny fanafody, na fohy sy lava. Ny safidy mody dia raisina sy vokatra tsy misy vokany. Amin'ity tranga ity dia heverina ho voka-pandrefana ny fikaon-dranomamy na kofehy kely manerana ny lavany, eo amin'ny faritry ny vavahady na amin'ny sisiny.
Ity lamba tsara tarehy ity dia hanome ny sariny amin'ny endriky ny hakantony, ny endriny ary ny hakantony. Ny tombontsoa lehibe amin'ny sehatra dia endrika tsara tarehy izay manintona foana. Na dia izany aza, ireo modely malaza indrindra dia marevaka loko lalina - violet, sôkôla, manga maitso, marsala ary ny hafa. Ireo akanjo marevaka marevaka dia vita amin'ny endrika mibaribary - amin'ny lamosina marevaka sy miverina, amin'ny fohy kely, miaraka amin'ny rantsana fohy. Ny fomba mahomby sy ny vehivavy dia mijery ireo vokatra lava be, izay feno hatrany ny fehikibo.
Lovely akanjo marevaka
Ny vahaolana amin'ny lamaody amin'ny endriky ny akanjom-behivavy tsara tarehy dia matetika ny famaranana tany am-piandohana. Ny tena malaza dia modely misy faritra malalaka. Amin'io tranga io, ny endri-tsoratra dia afaka manana endrika isan-karazany. Eo amin'ny fironana, hevitra mifandraika amin'ny endrika faribolana, oval na diamondra. Jereo tsara ny voambolana V-fo, izay matetika no fenoina amin'ny famolahana hazavana. Azonao atao ny manampy ny mason-koditra marevaka marevaka amin'ny endritsoratra mifanaraka aminy. Ny safidy mahaliana dia heverina ho modely amin'ny lavaka tsy misy fotony, izay mety kokoa amin'ny tsipika kezhualnyh.
Ny ankamaroan'ny tovovavy sy ny vehivavy dia vokatra vita amin'ny asa fanokafana. Eo amin'ny sehatra, ny vehivavy dia akanjo marevaka marevaka. Io safidy io dia mitoetra ho universal amin'ny sary rehetra. Ny modely hariva dia aseho amin'ny alokaloka mainty sy lalina. Ho an'ny fampakaram-bady romantika sy isan'andro dia tsara kokoa ny vahaolana loko mamirapiratra. Ny akanjon'ny vehivavy dia azo avy amin'ny dantelina tanteraka. Na izany aza, ny endrika amam-bika amorontsiraka kokoa sy manintona dia mamolavola akanjo mamolavola - faniry, ranomandry sy ruffles. Ny karazana fanorenana matetika dia endrika mifanohitra.
Boka marevaka amin'ny fomba boho
Ny modely amin'ny bohemian fomba dia tsy akanjo tsara tarehy sy tsara tarehy, fa tsara koa. Ny vokatra toy izany dia aseho amin'ny famoahana tsy tapaka sy matetika. Ny singa fototra dia ny fitaovana voajanahary - landihazo, lamba rongony, proshva ary ny hafa. Ny akanjom-behivavy sy ny akanjo mareva-doko dia matetika mahavariana amin'ny fanontana miloko na kofehy. Ny famolavolana karazan-tarehy amin'ny fomba ofisialy ao Boho dia endrika silhouette miaraka amin'ny tavy ambany, rantsana lava, famolavolana misokatra, ny fisiana fihenam-bidy, kofehy, kofehy.
Kanto marevaka miaraka amin'ny tsipìka
Ny famenon'ny vehivavy amin'ny akanjo tsara tarehy dia matetika mamoaka tsipìka koketsy. Ity karazana orinasa ity dia aseho amin'ny endriky ny fanoratana saribao, na lehibe na kely. Ny tsipika dia mety mifanandrify na loko iray miaraka amin'ny vokatra. Ny endrika lamaody hafa dia ny fomba amam-panaon'ny Ascot. Ny fifamatorana lava dia mamorona tsipìka tsara tarehy ao anaty akanjo marevaka, izay azo anaovana volomparasy lavalava na laconic amin'ny loko efa ela. Ny tena nalaza indrindra dia modely misy kavina mifanohitra amin'ny endrika tsipìka. Ao anatin'io lamaody io dia tena manan-danja tokoa ny akanjo marevaka ny vehivavy.
Ho an'ireo ankizivavy manana endrika maivana, ny akanjo marevaka tsara dia heverina ho vahaolana tena manan-danja amin'ny sary, satria manantitrantitra tanteraka ny vehivavy izy ary manilikilika amin'ny tsy fahatanterahan'ny endrika telo. Mba hisorohana ny fikajiana vahaolana, dia ilaina ny mitoetra ao amin'ny loko mainty maivana. Ny safidy tsara dia ny hatsaran-tarehy vehivavy ho an'ny silhouette tanteraka na misy fanjaitra avo lenta. Esory amin'ny santimetatra vitsivitsy ao amin'ny faritra ao anatiny ary tery ny soroka dia hanampy amin'ny fanontana ny lavaka. Hipoitra be dia be ny hoditra manify.
Lamba marevaka ho an'ny birao
Ny volom-behivavy fahiny dia an'ny trano fandroana henjana. Na izany aza, amin'ny fomba maoderina, ireo akanjo ireo dia nahazo ny toetra manerantany. Raha mitady vahaolana ara-barotra ianao, mijanòna mifidy karazana fotsy tsotra. Ny vahaolana tsara indrindra amin'ity tranga ity dia karazana lambam-pandriana tsotra miaraka amin'ny angom-bary. Ny fahatanterahan'ity modely ity dia hampidirin'ny amboara mainty misy ny talantalana sy ny fandriana. Afaka manatsara ny baskety ny akanjo marevaka. Raha tsy voafetra amin'ny rafitra henjana ny fehezan-damba fiakanjo, dia mety tsara ihany koa ny loko maitso, fa ny silhouette kosa dia tokony havanana.
Sary mampiavaka amin'ny blouses
Ny panty lama tsara tarehy dia mifandraika amin'ny ririnina sy amin'ny vanim-potoana mafana. Saingy ny sary dia mirindra sy mendrika, dia zava-dehibe ny afaka mifidy tsara ny sisa amin'ny akanjo. Andeha hojerentsika ny fampifandraisana mafonja indrindra:
Business bow. Amin'ity tranga ity, safidy tsara dia ny pensilihazo henjana na pensilihazo malaza. Fenoy ny sarin'ny kiraro tsy tapaka eo amin'ny voditongotra - kiraro, sambo , palitao na kiraro ankolaka.
Romantic image. Ho an'ny antokon'olona toy izany, dia tena manan-danja tokoa ny akanjom-behivavy mafana fafana. Ankoatra ny lamaody dia akanjo maingoka, masoandro na kitapo, fohy ny pataloha henjana sy kiraro madio - kapa, palitao.
Kežual style. Ho an'ireo kiraro ao an-tanàna, ireo modely tafahoatra, ny endrika fohy sy ny vahaolana dia ho tonga lafatra. Ny safidy tena izy ho an'ny ampahany ambany amin'ny sary dia ny jeans amin'ny endrika, akanjo fohy sy ny zipo fohy. Ny famaranana dia mety ho mpitaingin-tsoavaly, kiraro, kiraro, "traktera".
Teny an-dalana. Raha mankalaza fety ianao, dia misy volo malaza amin'ny pensilihazo miaraka amin'ny tendron-tsoavaly misy rambony, dantelina na soroka misokatra ho vahaolana tsara. Ny safidy tsara indrindra dia ny ankizivavy midi midi-be na maxi ao anaty antokom-pihetsiky ny kofehy na ny satroka.
Jeans miaraka amin'ny taratasy manga
Dresses ho an'ireo zokiolona
Ny akanjom-behivavy vehivavy - amin'ny inona no tokony harahina sy ny fomba hamoronana sary mahafinaritra?
Laser epilator amin'ny fampiasana trano
Fampidiran-drivotra karbona - soritr'aretina, fitsaboana
Mianjera amin'ny loha-kisoa any an-trano
Ny parrot lehibe indrindra eran'izao tontolo izao
Hashlama amin'ny teny armeniana
Caboomba ao amin'ny aquarium
Ahoana no ahazoana kiraro?
Nahoana raha maka sary saka?
Styfado avy amin'ny bitro
Fiteny 7 amin'ny 4 taona: ny ankizivavy polyglotte dia nandresy ny firenena!